Sweden oo Hooyooyin iyo Caruurtooda kasoo qaadeysa Dalka Suuriya Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo Hooyooyin iyo Caruurtooda kasoo qaadeysa Dalka Suuriya
June 11, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Sweden ayaa sheegtay in tiro ka mid ah haweenka ISIS ee haysta dhalashada Sweden iyo carruurtooda dib loogu celin doono Sweden oo laga soo celin doono xeryaha ku yaal waqooyiga Suuriya inta lagu guda jiro deyrta soo socota.
Sida laga soo xigtay idaacadda Ekot farriin arrintan la xiriirta ayaa loo soo gaarsiiyay wasaaradda arrimaha dibedda dowladda ismaamulka Kurdiyiinta, kulan dhacay isbuucii hore.
Ma cadda dhab ahaan tirada dumarka laga musaafurinayo Syria ee loo qaadayo Sweden, laakiin sida laga soo xigtay xogta wasaaradda arrimaha dibadda ee idaacadda Ekot, waxaa jiri kara ilaa 20 haween ah iyo ilaa soddon carruur ah.
Haweenka iyo carruurta dhalashada ka heysata dalal kale ayaa sidoo kale loo masaafurin doonaa dalalkooda ay ka yimaadeen.
Waxaa lagu soo warramayaa in 300 oo qof ay ka soo safreen Sweden si ay ugu biiraan kooxda ISIS, ku dhowaad 150 ka mid ah dadkaasi ayaa dalka dib ugu soo laabtay.
Waxaa laqiyaasayaa in kudhowaad boqol kamid ah haraagii mujaahidiintii ISIS ee Iswiidhishka ahaa ladilay, halka ilaa 50 kamid ah ay hareen, qaar kamid ah waxay kujiraan xabsiyo ay leeyihiin xoogaga Kurdiyiinta ee waqooyi bari Siiriya.